Tolotra fanamarinana mendrika
Karatra, mpamaky ary tranga
Fanavaozana ny mari-pahaizana
Taratasy tsy mendrika
Ny sonia elektronika dia efa raharaham-barotra isanandro manerana izao tontolo izao. Ny Internet dia mampiditra akaiky ny mpiara-miombona antoka sy mpiantoka, ary ny sonia elektronika ahafahanao mamita ireo andraikitra sy tetikasa lehibe nefa tsy miala amin'ny biraonao. Ity dia fomba iray hanaporofoana hanatsarana ny asan'ny orinasa. Ny orinasa maoderina dia mitaky fitaovana mety, ny sonia elektronika avy amin'ny Certum dia vahaolana tonga lafatra ho an'ny mpandraharaha izay mikarakara ny fanetsiketsehana ny filaminana sy ny filaminana amin'ny fotoana mitovy.
Amin'ny fomba tsotra sy mora sy toekarena azonao atao ny misoratra anarana antontan-taratasy amin'ny fitaovana rehetra: telefaona, takelaka na solosaina
Fanamboarana sonia katalogin'ny entana
Ny fanatanterahana ny fepetra takian'ny Lalàna Elektronika sonia, navoakan'ny antokona mahay manolotra serivisy fanamarinana. Ny sonia elektronika voamarina amin'ny alàlan'ny mari-pankasitrahana mendrika ary vita amin'ny fitaovana fanamboarana sonia elektronika azo antoka dia mitovy amin'ny sonia misy tanana. Ny fepetra takian'ny Lalàna sy ny fepetra entin'ny mpanatanteraka dia mifandraika ambaratonga fiarovana ny fitaovana, tokana ny data sy ny fomba fampiasan'ny mpanjifa. Ny fanamarinana fahazoan-dàlana dia azo omena amin'ny olona voajanahary fotsiny.
Ny taratasy fanamarinana dia apetraka hatrany amin'ny olona voajanahary, ary ny sonia elektronika voamarina amin'ny alàlan'ity fanamarinana ity dia raisina ho toy ny sonian'ny olona. Ny fanamarinana mahafeno ny fahazoana angon-drakitra manokana ihany dia fanamarinam-panjakana ary azo ampiasaina amin'ny fifandraisana rehetra amin'ny fitantanan-draharaham-panjakana, ny andrim-panjakana rehetra ary amin'ny raharaham-barotra. Ny olona mitazona mari-pankasitrahana toy izany ary mametraka sonia elektronika dia afaka miasa ho an'ny tenany sy amin'ny anaran'ny enti-manana solontenany tsy mila miditra amin'ny fampahalalana momba an'io entity io ao amin'ny taratasy fanamarinana.
Indray mandeha indray mandeha ny taratasy fanamarinana dia entinay miaraka amin'ny karatra kriptografika izay napetraka ao anaty mpamaky mifandray amin'ny solosaina. Hanao sonia antontan-taratasy dia tokony hapetraka ao anaty solosaina (USB input) ny mpamaky miaraka amin'ny karatra sy ny taratasy fanamarinana.
Kitapo famantarana sonia elektronika - tsindrio fotsiny
Miaraka amin'ny taratasy fanamarinana mahafeno ny fepetra azontsika atao, dia afaka misoratra anarana amin'ireo fitaovana rehetra ampiasainao ianao, na solosaina, telefaona na takelaka. Rehefa manao sonia antontan-taratasy miaraka amin'ity fanamarinana ity ianao dia tsy maintsy miditra amin'ny PIN (misy ny litera 6-8). Ny olona no mametraka ny PIN raha mandoa ny taratasy fanamarinana amin'ny solosaina.
Ny taratasy fanamarinana mendrika natao natao hanasonia ny e-tahiry misy sonia elektronika azo antoka (azo havaozina isaky ny 12 volana na isaky ny 24 volana).
Taratasy fanamarinan-tena fanamarinana E-mail - dia antontan-taratasim-panondro elektronika manamarina mpampiasa iray omena azy amin'ny Internet, misy andiam-panondro manokana, voamarina avy amin'ny Antoko Fahatokisana atokisana iray ary miaraka amina mpivady fanalahidy manokana.
Ny ID fanamarihana mailaka olona manokana dia manamarina ny maha-izy anao ny mombamomba anao. Afaka mandefa mailaka ianao nefa tsy manahy fa novaina amin'ny fomba rehetra izany. Tsy mbola azo antoka loatra ny adiresy mailaka tsy miankina.
Te hiaraka amin'ny IDO CERTIFICATE tianao ve ianao? Mandefasa hafatra amin'ny: biuro@e-centrum.eu ampidiro ny anaranao, miantso anarana sy nomeraon-telefaona anao. Antsoy ny 58 333 1000 na +48 58 500 8000. Hifandray aminao ny mpanoro hevitra anay.
Ny tombo-kase CERTUM dia serivisy fitokisana amin'ny endrika mari-pankasitrahana ho an'ny mari-pahaizana elektronika ho mendrika, misy ny angon-drakitra iray manana toetra ara-dalàna, i.e.
Ny taratasy fanamarinana dia azo ampiasaina hamehezana ireo antontan-taratasy, angon-drakitra ary taratasy elektronika avy amin'ny fikambanana nomena, izay manome antoka ny tsy fivadihan'ny angon-drakitra, manondro ny fiambenana izay namorona ny antontan-taratasy ary manampy singa tsy fanilikilihana noho ny fepetra ara-dalàna.
Ny tombo-kase elektronika dia azo ampiasaina amin'ny tombo-kase elektronika: - fifanarahana elektronika ofisialy amin'ny orinasa - fangatahana elektronika - antontan-taratasy (amin'ny endriny isan-karazany, anisany: - antontan-taratasy ofisialy (Fitsipika, Fanambarana, Famoahana ara-bola, Prospectus) - antontan-taratasy ara-dalàna (Asa ara-dalàna, antontan-taratasy ara-dalàna) ) - tolotra ara-barotra - takelaka dokam-barotra / takelaka vokatra amin'ny PDF - fampilazana / fanambarana banky / fiantohana / politika / fanamafisana
Tombo-kase elektronika ATSORATRA IZAY - CLICK HANY
Mpamaky karatra ACR 39T-A1
Mpamaky karatra ACR 39U-I1
Karatra kriptografika CryptoCertum 3.2
Raharaha fahamarinana ho an'ny mpamaky karatra mini
Ao amin'ny serivisy fametrahana fanamarinana omenay - Fiofanana amin'ny:
Vokatry ny ara-dalàna amin'ny fampiasana sonia elektronika azo antoka
Fanaovana sonia elektronika vaovao
Fametrahana ny logiciel e-sonia takiana
Fandefasana ny taratasy fanamarinana mahafeno ny karatra crypto
Ny fitantanana karatra cryptografika
Fanavaozana ny taratasy fanamarinana mahafeno ny fepetra takinao
Ny fampiasana taratasy fanamarinana mahafeno ny fandaharan'asa Płatnik sy ny e-Doka
Famandrihana taratasy misy sonia elektronika azo antoka ary manamarina sonia izany
• fanamorana sy hafainganana ny fanaterana ary, vokatr'izany, ny fanaterana antontan-taratasy,
Ny endri-tsoratra elektronika nosoniavina tamina taratasy fanamarinana:
• vidin-tsivana ambany,
• dikan-teny mora azo avy amin'ny tany am-boalohany,
• mora ny manova ny votoatin'ny antontan-taratasy tsy voatonona,
• tsy mila taratry ny antontan-taratasy elektronika ny antontan-taratasy an-tsoratra nentim-paharazana (na dia ny fahitana azy manokana aza),
• hajia mitazona fotoana voafetra 120.000 (mitovy amin'ny daty tsy dia fantatra)
• fanamarinana tampoka ny fanomezan-dàlana sonia amin'ny antontan-taratasy PDF (tsy mila mametraka rindrambaiko fanampiny)
• Ny fananana ilaina dia omen'ny mari-pankasitrahana mitovitovy amin'ny lafiny ara-dalàna amin'ny sonia tanana ary amin'ny fanindrona ny fotoana.
• fanekena avy hatrany ny sonia Certum toy ny itokisana amin'ny rindrambaiko Adobe Acrobat
Ny fanamarinantsika mendrika dia miantoka: ny maha-azo itokiana (fahatokisan'ny mpanoratra ny antontan-taratasy), tsy fandavana, fahatokisana (fahatokisana fa tsy niova ny antontan-taratasy aorian'ny nanaovana sonia)
• ny karatra kriptograpika dia hita ao amin'ny foiben'ny angona azo antoka
Faly izahay manambara fa vahaolana ara-teknolojia vaovao eo amin'ny sehatry ny sonia elektronika - Nahazo mifanaraka tanteraka amin'ny rafitra e-KRS (S-24) ny EasySign.
Mampiavaka ny teknolojia Qualified vaovao amin'ny teknolojia EasySign:
• Ny vahaolana EasySign dia endrika vaovao fanamarinana mahafeno, manana ny fiasa rehetra mitovy amin'ireo sonia navoaka amin'ny karatra fitotoana ara-batana, miaraka amin'ny fahasamihafana fa ny karatra kriptograpika dia hita ao amin'ny foiben'ny angona azo antoka. Ny fidirana amin'ny karatra amin'ny PC / MAC dia amin'ny alàlan'ny rindranasa manokana, izay ametrahantsika ny adiresy mailaka sy kaody 30 segondra novokarin'ilay fampiharana finday (amin'ny finday finday (amin'ny solosaina finday / tablet na Android).
• Ho fanampin'izany, ny antontan-taratasy dia azo atao sonia ao amin'ny rindranasa finday ao amin'ny telefaona / takelaka miaraka amin'ilay rindrambaiko nametraka sy manana alàlana (Andoid, iOS) - asa feno rehetra amin'ny sonia efa mahazatra.
• manana ny fiasa rehetra amin'ny sonia elektronika nentim-paharazana, izany hoe ny sonia miaraka amin'ny vokatry ny tsy fahatomombanana
• Ny tombony amin'ity karazana vahaolana ity dia ny tsy mila mpanjifa cartografika ara-batana (tsy mila mandefa ny seta) ny mpanjifa, afaka manasonia ny antontan-taratasy rehetra ho toy ny sonia nentim-paharazana, ankoatra izany dia afaka manao sonia antontan-taratasy amin'ny alàlan'ny finday (takelaka finday) izy ary mbola feno taratasy fanamarinana mahafeno.
• ny fidirana amin'ny karatra eo amin'ny PC / MAC dia atao amin'ny fampiasana ny rindranasa sy ny lisitry ny fidirana amin'ny alàlan'ny tocken amin'ny telefaona (kaody 30 isa) - mifandraika amin'ny fandefasana mametraka karatra nentin-drazana miaraka amin'ny mpamaky iray anaty solosaina.
• mifanaraka amin'ny takian'ny ZUS, Etazonia ary KRS (S-24)
• manohana ireo antontan-taratasy rehetra
Pejy vokatra tsotraSign Click >>
Taratasy fanavaozana fanamarinana mendrika
• Dingana 1 amin'ny 3 - Fividianana fanavaozana ny taratasy fanamarinana.
• Dingana faha-3 amin'ny 3 - Mampiditra ny taratasy fanamarinana amin'ny karatra kriptografika.
• Dingana 2 amin'ny 3 - fampahavitrihana ny fanavaozana ny taratasy fanamarinana mahafeno
Manoro hevitra ny hanombohana ny fanavaozana fanavaozana farafahakeliny 14 andro ianao alohan'ny hifarana ny fanamarinana anao. Ny faharetan'ny fizotrany manontolo dia miankina amin'ny fantsom-barotra voafidy sy ny endriky ny fividianana ny kaody fampiharana. Raha mividy kaody mavitrika fampiasa amin'ny elektronika ianao dia afaka mahazo: ao anatin'ny 24 ora (amin'ny andro fandraharahana) manomboka izao ny vola handoavana ny baiko. Mandritra io dingana io, ny Annex amin'ny Fifanarahana miaraka amin'ny Mpanoratra dia nosoniavina elektronika. Ny taratasy fanamarinana mahafeno izany dia mivoaka ao anatin'ny 7 andro fandraharahana aorian'ny fahazoana antontan-taratasy feno sy nosoniavina farany. Ny fanamarinana manavao dia mety manana vanim-potoanan-kery hatramin'ny 90 andro manomboka amin'ny fotoana namoahana azy - araka izany dia afaka manavao ny taratasy fanamarinana ianao mba hananana valiny avy amin'ny fivoahan'ny taloha.
FAROHANA NY FAMPISEHOANA NY TOERAN-TANINDRAZANA
Ny fahalalantsika sy ny traikefa anananao dia ahafahanao manangana tolotra manokana ho an'ny orinasanao tsy misy vidiny sy sarotsarotra ilaina.
Ny fampiasana ny fanampiantsika dia ahafahantsika mamolavola vahaolana matotra izay hiantoka ny fifandanjana eo amin'ny sarotsarin'ny vokatra sy ny fampiasana azo ampiharina amin'ny mety ho izy
Te hiaraka amin'ny tompon'ny Qualified Electronic Signature ve ianao, misy manana fanontaniana?
Mandefasa hafatra amin'ny: biuro@e-centrum.eu ampidiro ny anaranao, miantso anarana sy nomeraon-telefaona anao.
Antsoy +58 333 1000 XNUMX Ho hitan'ny mpanoro hevitra anao.